Wednesday January 13, 2021 - 11:23:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in shalay uu Carona dalkaas ku dilay dad ku dhow 4500 oo ruux islamarkaana uu soo ritay dad ku dhow 300 oo kun.
Jaamacadda arrimaha caafimaadka qaabilsan ee Johns Hopkins oo ah isha rasmiga ee laga qaato khasaaraha Carona ayaa shalay diiwaangelisay dhimashada 4470 ruux American ah kuwaas oo ku dhintay 50-ka gobol ee Mareykanku ka koobanyahay.
Wararka ayaa intaas ku daraya in shalay ladiiwaan geliyay bukaannada 235 kun oo ruux kuwaas oo kumanaan kamid ah ay xaaladooda caafimaad liidato waxaana ladhigay isbitaallo meydaani ah oo teendhooyin ka sameysan sababa laxiriira isbitaalladii waaweyn oo buux dhaafay.
Waa markii ugu horraysay ee dhimashada maalinlaha ah ee Carona ay ka sare marto Afar kun oo ruux sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka iyo warbaahinta maxalliga ah.
Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in tirada guud ee dadka Carona ugu dhintay dalka Mareykanka ay ka badatay 380 kun oo ruux halka bukaanadu ay ka gudbeen 22.8 malyuun oo ruux.
Bill de Blasio oo ah duqa magaalada New York ayaa ka digay in halis weyn oo dhanka caafimaadka ah ay dhici doonto marka ay martaan keydadka daawada Talaalka ee magaalada haddii lagaaro dabayaaqada bisha soo socota ee Feberaayo wuxuuna xukuumadda Washington ugu baaqay in ay buuxiso baahiyaha ay bulshadu qabto.
Dadka jiifa isbitaallada kala duwan ee dalka Mareykanka ee xaaladooda caafimaad ay aadka uliidato ayaa ka gudbay 131 kun oo ruux sida uu faafiyay guddiga Covid Tracking Project.
Dalka Mareykanka ayaa wali ah dalka koowaad ee dadkiisu ay ladhibanyihiin caabuqa Carona Virus caalami ahaan wuxuuna Mareykanku ku horreeyaa tirada dhimashada iyo bukaannada.